Tel: 067409019 | Mail: messenger@e-mining.gov.mm
အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း
အမှတ်(၂) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း
မြန်မာ့ ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီသည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ (၅၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကို နေပြည်တော်၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် ဩဂုတ်လ(၂)ရက်မှ (၁၁)ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Details...
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကျင်းပ
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော် ကို ၂၉.၆.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရှိ Gems Trade Center နှင့် Training Center ရှေ့မျက်နှာစာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသောလုပ်ကွက်များစာရင်း(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လသက်တမ်းကုန်)
ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသောလုပ်ကွက်များစာရင်း(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လသက်တမ်းကုန်) Details...
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ (၅၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီသည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ (၅၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကို နေပြည်တော်၊ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမတွင် ဩဂုတ်လ(၂)ရက်မှ (၁၁)ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Details...
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ (၅၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ (၅၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၆.၆.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
256 - 260 of 434 customers
Scroll Through More Customers Pages: [ 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ]
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.mining.gov.mm
Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar.
Tel : 95 67 409019
Fax : 95 67 409010
email : messenger@e-mining.gov.mm